Tonga nitsena azy teny amin'ny Kianja Betongolo Andriamatoa Jeneraly talen'ny kabinetran'ny SEG izay nisolotena an'Andriamatoa isany minisitry fiarovam-pirenena sy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria.
Olona iray no maty tsy tra-drano teny Nanisana omaly vao maraina be. Voahitsaky ny fiara kamio lehibe mpitatitra tany izy io, raha ny fampitam-baovaon’ny mponina teny an-toerana, ka tsy tana ny ainy. Nentina teny amin’ny Hopitaly ny razana taorian’ny loza.
SEKOLY ETAMAZAORO MALAGASY SY NIZERIANINA
Tonga nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin'ny biraon'ny Jeneraly talen'ny kabinetran'ny SEG ireo solontenan'ny sekoly Etamazaoro Nizerianina, omaly alatsinainy 13 mey tetsy Betongolo. Hanao fitsidihana an'ireo sekoly miaramila rehetra eto Madagasikara izy ireo mba hakana traikefa mikasika ny fiarovana, ny fandriampahalemana sy ny toetr'andro ary ny toekarena.